SIRNA NAFXANYAA Abiyot Kasaye Belayneh OROMOO RASHANUU ITTI FUFEERA! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSIRNA NAFXANYAA Abiyot Kasaye Belayneh OROMOO RASHANUU ITTI FUFEERA!
SIRNA NAFXANYAA Abiyot Kasaye Belayneh(MINILIK ) OROMOO RASHANUU ITTI FUFEERA!
Waxabajjii 01,2020 Mana hidhaa Buraayyuu irraa gara Kibba Oromiyaa Godina Booranaatti dabarsamee hidhaa keessatti hiraarsamaa kan jiru Jaal Gadaa Gabbisaa, Waxabajjii 01,2020 har’a ganama Qajeelcha Poolisii Yaaballoo irraa baasamee gara Finfinneetti dabarsamaa akka jiru oduun amma nu gahe ni ibsa. Gara Finfinneetti fudhatamuu malee Finfinnee dhaa eessa akka geessamu oduun kun waan ibse hin qabu.
Jaal Gadaa Gabbisaa waliin mana hidhaa Buraayyuu irraa fuudhamee gara Kibba Oromiyaa Booranatti kan hidhamee jiru miseensi GS-ABO Jaal Amaan Filee achumatti hambisamee akka jirus oduun kun ifa godheera.
Jaallan Gadaa Gabbisaa, Amaan Filee, Gaazexeessitoota Dassuu Duulaa, Waaqoo Noolee fi konkolaachisaa Isma’el Abdulrazzaaq Bitootessa 07,2020 miseensa SHG-ABO Jaal Abdii Raggaasaa Buraayyuutti hidhame dubbisuuf akkuma dhaqanitti achitti qabamanii hidhaman.
Gaazexeessitootni Dassuu Duulaa fi Waaqoo Noolee akkasumas konkolaachisaa Isma’el Abdulrazzaaq Caamsaa 30,2020 mana hidhaa Galaanitti argamu irraa hiikamuun isaanii ni yaadatama.
Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) gabaase!
SIRNA NAFXANYAA ABIYOT MINILIK OROMOO RASHANUU ITTI FUFEERA!
Sirni nafxanyaa Abiyot Minilik ilmaan Oromoo qalee bineensa nyaachisuu, ajjeesee akka waraabeessi nyaatu darbuu itti fufeera. Akkuma torbaan darbe Muhammad Amin(Moggoo Kiyya) ajjessanii reeffa isa bineensa nyaachisan nama Abdii Abraahim Jedhamus Harargee Bahaatti kunoo ajjessanii warabeessaaf darbanii reeffii isa argamee hospitalaa Hiwot Faana magaala Harar jira.
Ilmaan Oromoo hidhaa guurani rashanuu..Ajjessanii reeffaa warabeessaaf laachu fi
Qalanii daandii irratti gatuu sirni Abiyot Minilik itti fufeeti jira. Ilmaan Oromoo waan tokko beekuudha qabna falmanne malee kadhannee fadhiddoon mirga nuuf laatte hin beektu. Kanaafu qabsoo as deema jirtuun yeroo kamiinuu Caalaa of qopheessaa.. Ajjeechaa, gudeeddii fi warabeessaaf laatamuun manattu nurra hin hafne waan taheef qabsoofne wareegamne ifatti bahuun dirqamaadha!
Hangasuu Mohammed Wado